त्यसपछि उनको पेटबाट निकालियो – Namaste Host
April 11, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on त्यसपछि उनको पेटबाट निकालियो
आफ्नै रौँ खा’ने आदत रहेकी एक किशोरीको पे’टमा यतिधेरै ‘रौँ जम्मा भएछन् कि डाक्टरहरुले हालै श’ल्यक्रिया गरेर झण्डै ७ किलो तौलको रौँको ड’ल्लो बाहिर निकालेका छन् ।
ती १७ वर्षीया किशोरीको पे’टभित्र रहेको रौँको ड’ल्लो प’हिचान गर्नका लागि डाक्टरहरुलाई समेत ह’म्मेह’म्मे परेको थियो । अ’ल्ट्रासाउ’ण्ड गर्दा सुरुमा डाक्टरहरुले पेटमा रहेको त्यो चिज ट्यु’मर रहेको आशंका गरेका थिए ।
त्यसपछि उक्त चिज निकाल्नका लागि श’ल्यक्रिया सुरु गरेका डाकटरहरुले ६ घण्टाको स’घन श’ल्यक्रियापछि ७ किलो तौलको उक्त ड’ल्ला बाहिर निकाले ।
यो घटना छिमेकी मुलुक भारतको झारखण्डको हो । झारखण्डको बो’कारो जिल्लामा रहेको एक अस्पतालमा श’ल्यक्रिया गरी ती किशोरीको पे’टबाट रौँको ड’ल्लो निकालिएको हो ।
उक्त श’ल्यक्रियामा सं’लग्न प्रमुख डाकटरले आफ्नो ४० वर्षे चिकित्सा अनुभवमा यो पहिलो घटना भएको बताएका छन् । डाक्टरका अनुसार ती किशोरीमा आफ्नै रौँ खाने समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । उनले निलेका रौँ सप्पै पेटमा जम्मा भएर गु’जुल्टिँ’दै ड’ल्लो बनेको हो ।
श’ल्यक्रियापछि ती युवतीको अवस्था स्थिर रहेको बताइएको छ। एजेन्सी
स्वस्थ रहनका लागि हरेक दिन नुहाउन जरुरी छ। दिनहुँ नुहाउने गर्दा शरीरमा फूर्ति आउँछ। सफासुग्घर रहनुका साथै विभिन्न किसिमका संक्रमण तथा रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ। नुहाउँदा केही कुरा ध्यान दिन भने जरुरी छ। नत्र त्यसले शरीरमा थप हानी पुर्‍याउन सक्छ।
नुहाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु:
गलत साबुनको प्रयोग नगर्ने : नुहाउनका लागि प्रयोग हुने साबुनमा तेल र क्लींजरको मात्रा हुनुपर्छ। गलत साबुनको प्रयोगले छालासँग सम्बन्धित समस्या नित्याउन सक्छ।
सफा तौलियाको प्रयोग : नुहाउँदा प्रयोग हुने तौलिया पनि समयसमयमा धोइरहनुपर्छ। तौलियालाई दिनहुँ घाममा सुकाउनुपर्छ। हप्तामा कम्तीमा २ पटक तौलिया धुनुपर्छ। पहिल्यै चिसो चिसो वा भिजेको तौलिया प्रयोग गर्नु हुँदैन।
नुहाउनु अघि र पछि बाथरुमको भेन्टिलेसन खुला राख्ने : बाथरुममा नुहाउनु अघि र नुहाइसकेपछि अनिवार्य रुपमा झ्याल तथा भेन्टिलेसन खुला राख्नुपर्छ। बाथरुममा हावाको आवतजावत राम्रो हुनुपर्छ।
अत्याधिक तातो पानी प्रयोग नगर्ने : खासगरी जाडो महिनामा नुहाउँदा तातो पानी प्रयोग गरिन्छ। तर, अत्याधिक तातो पानीले छालामा इन्फेक्सन हुने, छाला सुक्खा हुने जस्ता समस्या देखिन सक्छ।
कपालमा दैनिक स्याम्पु नगर्ने : दिनहु कपालमा स्याम्पु प्रयोग गर्नाले कपालको चमक हराउन सक्छ। कपाल सुक्खा हुने सम्भावना पनि हुन्छ। स्याम्पु प्रयोग गरेपछि कन्डिशनर पनि प्रयोग गर्न जरुरी छ।
नुहाएपछि मोइस्चराइजर लगाउने : नुहाउने बित्तिकै शरीर सुक्खा हुन नदिन मोइस्चराइजर लगाउन अनिवार्य छ। यसले शरीर सुक्खा हुन दिँदैन।
यी ठाउँमा साबुन नलगाउने : काखी, कम्मर, पैतला, प्राइभेट पार्ट र अनुहारमा धेरै साबुन प्रयोग गर्नु हुँदैन।
घाउ नछोप्ने : यदि शरीरमा कुनै घाउ वा चोटपटक लागेको छ भने नुहाउने समयमा छोप्नु हुँदैन। सानो चो’टप’टक छ भने नुहाउँदा खुलै छोडेर पछि पट्टी लगाउन सकिन्छ।
यो पनि : ओखरका आठ फाइदा
ड्राई फुट्स अधिकांशलाई मनपर्छ। जसमध्ये ओखर पनि एक हो। विभिन्न कुकिज, मफिन, ब्राउनिज आदिमा ओखर राखेर बनाइएको हुन्छ।
स्वादमा मात्र होइन, ओखर एक पौष्टिक तत्वले भरिपूर्ण ड्राइ फुट्स पनि हो। शरीरलाई स्वस्थ राख्न ओखरको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। ओखरको सेवनबाट हुने विभिन्न फाइदा बारे यहाँ चर्चा गरिएको छः
१. पौष्टिक तत्वले भरिपूर्ण
एक आधा कप वा १४ वटा आधा ओखरको सेवनबाट १८ ग्राम बोसो, ४ ग्राम प्रोटिन, २ ग्राम फाइबर प्राप्त गर्न सकिन्छ। शरीरलाई दैनिक आवश्यक पर्ने करिब ५० प्रतिशत म्याग्नेसियम, आइरन, क्याल्सियम र भिटामिन बी हुने गर्छ। ओखरको सेवनले हड्डीलाई स्वस्थ्य बनाउनुका साथै क्यान्सर, मुटुसम्बन्धी रोगबाट बच्न मद्दत पु¥याउँछ। चोटपटकलाई छिटो निको बनाउन पनि यसको भूमिका निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।
२. स्वस्थ बोसो प्राप्त गर्न सकिने
ओखरको सेवन गर्दा शरीरलाई आवश्यक पर्ने स्वस्थ बोसो प्राप्त गर्न सकिन्छ। अल्फा लिनोलेनिक एसिड र एएलए ओमगा थ्रि फ्याट्टी एसिडको एक प्रकार हो, जसले एक प्रकारको सुजनलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
३. पेट र मुटुलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ
ओखरको नियमित सेवनले पेट र मुटुलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। ओखरले रक्तचाप घटाउनुका साथै कालेस्ट्रोललाई पनि नियन्त्रित राख्ने पाइएको छ।
४. रक्तचापलाई कम गराउँछ
सन् २०१९ मा प्रकाशित अमेरिकन हार्ट एशोसिएसनको अध्ययन अनुसार ओखर खाने व्यक्तिमा रक्तचाप र कोलेस्ट्रोलमा सकारात्मक परिवर्तन आएको पाइएको थियो। ओखरको नियमित सेवनले मुटुलाई पनि फाइदा गरेको अध्ययनमा पाइएको थियो।
५. मस्तिष्कलाई फाइदा
ओखरको नियमित सेवनले मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। द अमेरिकन जर्नल अफ क्लिनिकल न्यूट्रीशनमा प्रकाशित एक अध्ययनले ओखरको सेवनले मस्तिष्कलाई फाइदा पुग्ने गरेको पाइएको थियो।
६. स्तन क्यान्सरबाट बचाउँछ
ओखरले मुटु, मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्ने मात्र नभई क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगबाट पनि बचाउँछ। ओखरको सेवनले स्तन क्यान्सरको जोखिम कम गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
७. मोटोपनाको जोखिमलाई कम गर्दछ
ओखरको सेवनले तौललाई नियन्त्रित राख्न मद्दत गर्दछ। डायबिटिज ओबिसिटी एण्ड मेटाबोलीजममा प्रकाशित एक जर्नल अनुसार ओखरको सेवनले भोकलाई कम गर्न मद्दत गरेको पाइएको उल्लेख छ। भोकलाई कम गर्ने भएकाले ओखरको सेवनले मोटोपनाको जोखिमबाट बचाउन समेत मद्दत गर्ने जर्नलमा उल्लेख छ।
८. पुरुषको प्रजनन क्षमतालाई सुधार गर्छ
सन् २०१९ मा प्रकाशित जर्नल न्यूटिएन्ट्समा ओखरको नियमित सेवनले पुरुषको प्रजनन क्षमतामा सुधार गर्ने गरेको उल्लेख छ। शोधकर्ताका अनुसार १४ साताभन्दा बढी समयसम्म दुई वटा ओखर खाने पुरुषमा कामोत्तेजक र यौन इच्छामा उल्लेखनीय सुधार भएको पाइएको थियो।
यो पनि : यी आठ तरकारी र फलफूल जसमा हुन्छ सुन्तलामा भन्दा बढी भिटामिन सी
१. रातो खुर्सानी : सुन्तलाभन्दा बढी भिटामिन सी पाइनेमध्ये रातो खुर्सानी पनि एक हो। काटिएको आधा कप या पाकेको पिरो खुर्सानीमा १ सय ७ दशमलव ८ मिलीग्राम भिटामिन सीको मात्रा हुने गर्छ। खुर्सानीलाई पिरो बनाउने क्याप्साइसीनले घुँडा तथा मांसपेशीको दुखाईलाई कम गर्ने द युनिभर्सिटी अफ बफेलोको अध्ययनमा पाइएको छ।
२. ब्रोकोली : ब्रोकोली धेरैको रोजाईमा पर्ने तरकारी हो। ब्रोकोलीमा भिटामिन सीको मात्रा १ सय ३२ मिलीग्राम हुने गर्छ। फाइबरले भरिपूर्ण यो तरकारीमा मात्र ३० क्यारोली हुन्छ। ब्रोकोलीले सेवनले क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगलाई रोक्न गर्न मद्दत गर्दछ।
३. मेवा : नियमित रुपमा मेवा खाँदा हाम्रो शरीरमा धेरै फाइदा हुने गर्छ। मेवाले छालालाई चम्काउनुका सार्थ हड्डीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। एक कटौरा मेवनको सेवन गर्दा ८८ दशमल ३ मिलीग्राम भिटामिन सी प्राप्त गर्न सकिन्छ।
४. स्ट्रबेरी : स्ट्रबेरी फललाई मन नपराउने सायद कमै होलान्। स्ट्रबेरीबाट हामीले ८४ दशमलव ७ मिलीग्राम भिटामिन सी प्राप्त गर्न सक्छौं। स्ट्रबेरीले मुटुलाई स्वस्थ राख्न र दातलाई प्राकृतिक रुपमा सेता बनाउन पनि मद्दत गर्दछ।
५. काउली : चाहे तपाई काउलीलाई भुटेर, स्टीम गरेर या जसरी खानुहोस्। एउटा काउलीबाट १ सय २७ दशमलव ७ मिलीग्राम भिटामीन सी प्राप्त गर्न सकिन्छ। साथै ५ ग्राम फाइबर र ५ ग्राम प्रोटिन पनि काउलीमा हुने गर्छ।
६. भुईकटहर : भुईकटहर एक यस्तो फल हो, जसबाट शरीरलाई धेरै फाइदा हुने गर्छ। भुईकटहरले खाना पचाउन, ब्लोटिङलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। साथै कडा कसरतपछि शरीरलाई छिटो शक्ति प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ। भुईकटहरमा ७८ दशमल ९ मिलीग्राम भिटामिन सी हुन्छ।
७. किवी : किवीमा १ सय ३७ दशमलव २ मिलीग्राम भिटामिन सी हुन्छ। यसका साथै किवीमा पोटासियम र कोपर भरपूर्ण मात्रामा पाईन्छ।
८. आँप : आप धेरैको रोजाईमा पर्ने फलमध्ये एक हो। आपबाट १ सय २२ दशमलव ३ मिलीग्राम भिटामिन सी प्राप्त गर्न सकिन्छ। आप भिटामिन सी को मात्र नभई भिटमिन ए को राम्रो स्रोत मानिन्छ। भिटामिन सी ले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउनुका साथै आँखालाई पनि स्वस्थ राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ।
टिकटकमा भाइरल मल पोखरीको यस्तो रहेछ कथा, स्थानिय महिलाले सुनाइन् डरलाग्दो घटना (भिडियो हेर्नुस्)